Food – Page6– Healthy Life Journal
အကြောတက်တတ်သူတို့ ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်သင့်သလဲ . . .
မေး. ကျွန်မက အတက်စာတွေ စားမိရင် အရမ်းအကြောတက်တတ်ပါတယ်။ အကြောတက်တိုင်းလည်း ဆေးမသောက်ပါဘူး။ ဆေးသောက်တာ များလာရင်ကော ဆေးယဉ်ပါးမှုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ ဆေးယဉ်ပါးမှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ အကြောမတက်အောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်နဲ့ အနေအထိုင်တွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဘယ်အစားအသောက်တွေက အကြောပိုတက်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ နန်းနန်း၊...
သွေးတွင်းမကောင်းသော ကိုလက်စထရောများနေသူတို့ သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သော အစာ ၁၀ မျိုး
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုလက်စထရောဆိုတာ သွေးထဲက အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ အမြှေးပါးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောနဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိကာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော မြင့်မားနေရင်တော့ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ဝေဒနာဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
သင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် အားကောင်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် သွယ်လျစေမည့် သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
၊ လရိပ်မေ ၊ ကျွန်မတို့စားသောက်တဲ့အချိန်တိုင်း စားသမျှ ကယ်လိုရီကနေ စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ လိင်အမျိုးအစားနဲ့ အသက်အရွယ်စတဲ့ အချက်တွေအားလုံးဟာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်မှာ အရေးပါတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်က မြန်လေလေ၊ ကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းလေလေဖြစ်ကာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။...
၀ယ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လတ်ဆတ်အောင် သိမ်းဆည်းနည်းများ
နေ့စဉ် စားသောက်နေကျ အစားအသောက်ထဲမှာ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ထည့်စားတာက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက ကျန်းမာရေးပြဿနာ အများစုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဝယ်ယူပြီး အိမ်မှာ သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလို သိမ်းထားတဲ့အခါ ဘယ်လိုသိမ်းထားရမယ်ဆိုတာ မသိတာကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့ လတ်ဆတ်မှုနဲ့ အနံ့အရသာဟာ ပျက်ပြယ်သွားပြီး ပုပ်သိုးသွားတာမျိုးတောင်...
ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သင့်သလား၊ အအေးခန်းထဲ ထားသင့်သလား
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ဝယ်လာတဲ့ စားစရာ၊ သောက်စရာတွေကို ရေခဲသေတ္တာရဲ့ရိုးရိုးအခန်းထဲမှာပဲ ထားရမလား၊ ခဲတဲ့အထိ အအေးခံရတဲ့ Freezer ထဲမှာ ထားသင့်သလား.. ဒါက အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဝေခွဲမရဖြစ်စရာပါ။ ဒါ့အပြင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားရင် ဘယ်လောက်ကြာကြာအထားခံသလဲ၊ အသားတွေကို မချက်ဘဲ အအေးခံတဲ့အခန်းထဲကို...
ခါးမတုတ်ဘဲ စွမ်းအင်တိုးစေမည့် အကောင်းဆုံး အစာများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ သင်စားတဲ့ အစာအတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အသံကိုနားထောင်ကြည့်ပြီး ဘယ်အစားအသောက်တွေက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။ (၁) အခွံမာသီး ဆားထည့်ပြီး ပြုပြင်မထားတဲ့ အခွံမာသီးတွေကို စားတာကြောင့် အာဟာရဓာတ်ရရှိပြီး စွမ်းအင်တိုးစေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျော့ကျစေရုံသာမက စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်သွားစေဖို့ အစားအစာတချို့က ကူညီနိုင်ပါတယ်။ (၁) ထောပတ်သီး ဘာကြောင့်လဲ – ထောပတ်သီးမှာပါတဲ့ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ မိုနိုမပြည့်ဝဆီတွေက စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးတိုးကိုကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစားသင့်သလဲ...